Thenga Inkampani Yeshelf emazweni angu-106
IShelf Company iqala kusuka ku- $ 200
Umhlinzeki wesevisi omuhle kakhulu nohamba phambili
Sinikezela ngeShelf Company Purchase service cishe kuzo zonke izingxenye zomhlaba, iShelf Company Services emazweni ayi-106
Amanani Amancintisana amahle kakhulu
Cela Usizo lwamahhala
Ungayithenga kanjani Inkampani Yeshelf
I-EXTRA CARE kufanele ithathwe, ngenkathi, yokuthenga iShelf Company, i-AUDIT efanele kufanele yenziwe, ukugwema ukushaqeka kanye nezimanga.
Sithumele imfuneko sakho, sizokunikeza uhlu lwezinkampani ezitholakalayo zamashalofu Khetha> Ukuthenga> Qala
Ngemuva kokukhokha, sinikeze izinguquko zakho ezihlongozwayo kuNkampani, ngokwesibonelo; Ukushintshwa kwegama, ushintsho (ama) ekwakhiweni kwenkampani, Khulisa noma kwehlise imali eyabelwe, njll.
Ngokuya ngezicelo zakho, ochwepheshe bethu bazolungisa imibhalo efanele yeNkampani evame ukuthatha izinsuku ezi-3 - 5.
Inkampani yakho manje iyasebenza futhi isilungele ukuyisebenzisela impumelelo yakho yesikhathi esizayo.
Konke Odinga Ukukwazi NgeShelf Company
Inkampani ye-Shelf idalwe ngokuyisisekelo futhi ishiywe ngaphandle kwemisebenzi yebhizinisi. Lezi zinkampani zithengiselwa abantu (abantu) abafisa ukuqala imisebenzi yebhizinisi enkampanini yabo ngaphandle kokulandela inqubo yokufaka entsha. Izizathu ezejwayelekile zokuthenga inkampani eshalofini zibandakanya okulandelayo:
Inkampani iShelf isindisa isikhathi esithintekayo ukufaka inkampani entsha.
ISherf Corporation isiza ukukhombisa impilo ende yobumbano, ukuheha amakhasimende amasha kanye / noma abatshalizimali
IShelf Company isiza ukuthola ukufinyelela esikweletini sebhizinisi
ISherf Corporation iyasiza ukuthola ithuba lokubhalisela izinkontileka izinkontileka. (Kunemigwaqo eminingi edinga ukuthi inkampani kufanele ibe sebhizinisi isikhathi esithile sokubhalisela izinkontileka)
* Qaphela: Izinkampani zeshelufu zivame ukubiza kakhulu kunokufakwa okusha ngenxa yeminyaka yazo.
Inhloso yenkampani njengokusho kwe-charter ezinkampanini eziningi zamashalofu ezikhona, yakhethwa ngenhloso yokuthi inkampani ikwazi ukusebenza cishe kuyo yonke imikhakha yezentengiso, yezimboni kanye nezohwebo.
Inhlangano iyatholakala kungakapheli amahora ambalwa
Ukubhalisa irejista yezentengiselwano
Umthamo osheshayo wezomthetho
Awukho umsebenzi webhizinisi langaphambilini
Azikho izikweletu noma izibopho
Akunabo ubungozi besikweletu
* Qaphela: Izinkampani zeshelufu zivame ukubiza kakhulu kunokufakwa okusha ngenxa yeminyaka yazo (izinyanga ezintathu kuya kwemihlanu).
Sicela unikele ngemibhalo elandelayo yokuthenga inkampani yamashalofu yabo bonke abaqondisi, abanikazi bezinzuzo, abanikazi bamasheya, amasiginesha ogunyaziwe:
Ikhophi ebhalwe phansi yephasiphothi yakho evumelekile. Iphasiphothi kumele isayinwe kanti nesiginesha kufanele ifane nesiginesha efomini lesicelo. Isithombe kufanele sicace futhi sibe sezingeni elihle.
Ikhophi ebhaliwe noma eqinisekisiwe yencwadi eyaziwa ngeBanker (ubhalwe hhayi izinyanga ezingaphezu kwezingu-3). Cishe wonke amabhange emhlabeni wonke akhipha i- “Refer Letter”. Ungamane ucele incwadi yereferensi ebhange lakho, lapho ubamba khona i-akhawunti. Incwadi yesethenjwa kufanele ikhombise ukuqinisekiswa kwesikhathi sobudlelwano, inombolo ye-Akhawunti, okungcono ukulinganisela ngalolo suku nokukhulunywa ngalo "ukusebenza kwe-akhawunti kuyenelisa".
Ezimweni lapho abaninimasheya kanye / noma abaqondisi beyizigungu zenkampani, isethi ephelele yemibhalo ehlanganisiwe iyadingeka: Uhlu lwabaqondisi, isitifiketi sokuhlanganiswa, Uhlu lwabo bonke abaninimasheya, uNobhala Wenkampani, Izitifiketi Zokwabelana, ikhophi ye-'Simemezelo Sethembiso 'phakathi kwabanikazi bamasheya abakhethiwe nomnikazi (noma abasebenza) abakhona (iSitifiketi Sokuma Okuhle (Lokhu kusebenza kuphela uma, inkampani isebenze izinyanga eziyi-12 noma ngaphezulu lezo izinyanga eziyi-12)
Ikhophi ebhalwe phansi yamaphasiphothi avumelekile, umthethosivivinywa wesisetshenziswa (njengobufakazi bekheli) kanye nencwadi ebhekela yasebhange ngamunye nabaphathi (aba) nye, Umnikazi (aba) nzuzi kanye naba (Abangabanini)
Kunamazwe ambalwa lapho kudingeka khona kuphela ikhophi lePasipoti nokuhumusha kwePasipoti.
Sinikezela ngezinsizakalo zeSherf Company ezinhlanganweni zamabhizinisi zomhlaba kulezi zindawo ezichazwe ngezansi:
Ngabe udinga i-Shelf Company?
Inkampani Yeshelf Albania
IShelf Company Antigua neBarbuda
Ishelf Company Argentina
Inkampani Yeshelf Inkampani e-Austria
IShelf Company Bahrain
IShelf Company Belgium
IShelf Company Bolivia
IShelf Company iBosnia neHerzegovina
Inkampani Yeshelf eBrazil
Inkampani Yeshelf Bulgaria
IShelf Company BVI
IShelf Company Canada
IShelf Company Cayman Island
IShelf Inkampani yeChile
IShelf Company China
Inkampani Yeshelf ICroatia
IShelf Company Cuba
Inkampani Yeshelf Kupro
IShelf Inkampani eDenmark
IShelf Company Dominica
IShelf Company Dominican Republic
IShelf Company Fiji
IShelf Inkampani yeFinland
Inkampani Yeshelf Germany
IShelf Company Greece
IShelf Company Grenada
Inkampani Yeshelf Gu Guala
IShelf Company Ireland
Inkampani ye-Shelf Inkampani e-Italy
Inkampani Yeshelf Kaz Kazstan
IShelf Company Kuwait
Inkampani Yeshelf Lat Lat
Inkampani Yeshelf Liechtenstein
IShelf Company Lithuania
IShelf Company London
IShelf Company Luxembourg
IShelf Inkampani iMalaysia
IShelf Company Malta
IShelf Company Marshall Islands
IShelf Company Mauritius
IShelf Company Micronesia
IShelf Inkampani iMonaco
IShelf Inkampani iMontenegro
Ishelf Company Netherlands
IShelf Company Norway
IShelf Company Panama
IShelf Company Papua New Guinea
IShelf Company Paraguay
IShelf Company Philippines
Inkampani Yeshelf Poland
IShelf Company Portugal
IShelf Company Qatar
Inkampani Yeshelf Romania
IShelf Company Saint Kitts neNevis
IShelf Company Saint Lucia
IShelf Inkampani iSerbia
IShelf Company Seychelles
IShelf Company Singapore
Inkampani Yeshelf Slovak
IShelf Company Slovenia
IShelf Company South Africa
IShelf Company South Korea
IShelf Company Spain
Ishelf Inkampani Sweden
IShelf Company Switzerland
Inkampani Yeshelufu I-Taiwan
Inkampani ye-Shelf Thailand
IShelf Company Turkey
IShelf Company UAE
IShelf Company United Arab Emirates
Inkampani Yeshelf UK
Inkampani Yeshelf United Kingdom
Inkampani Yeshelf United States
Inkampani ye-Shelf Inkampani yase-USA
IShelf Company Uruguay
IShelf Company Vanuatu
IShelf Inkampani yeVenezuela
IShelf Company Vietnam
IShelf Company Arizona
IShelf Inkampani I-Arkansas
IShelf Company California
IShelf Company Colorado
I-Shelf Company District of Columbia
IShelf Company Florida
Inkampani Yeshelufu IHawaii
Inkampani Yeshelf Ill Ill
IShelf Company Indiana
IShelf Inkampani Kansas
Inkampani Yeshelf Kent Kent
Isizinda Senkampani Maine
Inkampani Yeshelf Maryary
IShelf Company Massachusetts
IShelf Company Michigan
IShelf Company Minnesota
IShelf Company Missouri
IShelf Company Montana
IShelf Company INew Hamphire
IShelf Company New Jersey
IShelf Inkampani New Mexico
Inkampani Yeshelf New York
Ishelf Company North Dakota
Ishelf Company Ohio
Inkampani Yeshelf Okokoma
IShelf Company Pennsylvania
IShelf Company Rhode Island
IShelf Company South Carolina
IShelf Company South Dakota
IShelf Company Tennessee
IShelf Company Texas
IShelf Inkampani Utah
IShelf Company Vermont
Ishelf Company Washington
IShelf Company West Virginia
Inkampani ye-Shelf Inkampani yeWisconsin
Inkampani Yeshelf Wyoming
Singakusekela nge-akhawunti yasebhange evulekile yenkampani yakho. Emandleni amaningi kufanele unikeze imisebenzi yebhizinisi lakho nezinhlelo zesikhathi esizayo, ubufakazi bemisebenzi yebhizinisi lakho lamanje usebenzisa izincwajana ezikhona yenkampani yakho, iwebhusayithi, izinkontileka zebhizinisi, isivumelwano sokuqashisa (uma sikhona).
Inkampani Yeshelf ene-Akhawunti yeBhange
Qaphela * Lokhu akusebenzi kumabhizinisi wokuqalisa.
Abasebenzisi abayizigidi abasekeli noma banikeze ngezinsizakalo zenkampani yamashalofu ezigabeni / amabhizinisi ashiwo ngezansi:
Insizakalo Yenkampani Yeshelf ayitholakali izinkampani noma umuntu ngamunye osebenza kudivayisi engaholela ekuhlukunyezweni kwamalungelo abantu noma isetshenziselwe ukuhlukunyezwa.
ISherf Companies Service ayitholakali izinkampani noma ezisebenzelana kwezohwebo, ukusatshalaliswa noma ukukhiqizwa kwezingalo, izikhali, izinhlamvu, ama-mercenary noma izinkontileka zenkontileka.
Insizakalo Yenkampani Yeshelf ayitholakali ezinkampanini noma kumuntu ngamunye osebenza ekubhekeni kwezobuchwepheshe noma ngemishini yokulungisa izinto ezibucayi noma yokuqina kwezimboni.
Izinsizakalo Zezinkampani ZeSherf azitholakaleli izinkampani noma umuntu ngamunye osebenzelana kunoma yiziphi izinto ezingekho emthethweni noma zobugebengu noma zabantu (abantu) abahlu lwabansundu ngaphansi komthetho wanoma yiliphi izwe.
Insiza Yeenkampani Yeshelf ayitholakali ezinkampanini noma ezisebenzelana ngezinto zofuzo.
Izinsizakalo Zenkampani Yeshelf ayitholakali ezinkampanini noma kumuntu ngamunye osebenzelana nezinto eziyingozi noma eziyingozi zemvelo, amakhemikhali noma izinto zenuzi ezibandakanya, imishini noma imishini esetshenziselwa ukwenza, ukuphatha noma ukulahla lokho kwaziswa.
Izinsizakalo Zenkampani Yeshelf ayitholakali ezinkampanini noma kumuntu ngamunye osetshenziselwa ukuhweba, ukugcina noma ukuthutha izitho zabantu noma izilwane, ukuhlukunyezwa kwezilwane noma ukusetshenziswa kwezilwane kunoma yikuphi ukuhlolwa kwesayensi noma komkhiqizo.
Izinsizakalo Zezinkampani ZeShelf azitholakali ezinkampanini noma kubantu abasebenzela izinhlangano zokutholwa, kufaka phakathi izinqubo zokuba ngumzali ngokwesivumelwano noma yiluphi uhlobo lokuhlukumeza amalungelo abantu;
Insizakalo Yenkampani Yeshelf ayitholakali kuzinhlelo zeNkolo nezinsizakalo zabo.
Insizakalo Yezinkampani ZeSherf ayitholakali ezinkampanini noma ezisebenzelana nabo kwezocansi.
Insizakalo Yenkampani Yeshelf ayitholakali izinkampani noma ezisebenzelana ngokuthengisa iPiramidi.
Izinsizakalo Zenkampani Yeshelf ayitholakali ezinkampanini noma kumuntu ngamunye osebenza eDarap paralia.
Insizakalo Yenkampani Yeshelf ayikho